Wararkii ugu dambeeyay dadaalada xalka loogu raadinayo dagaalka Itoobiya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dadaalada xalka loogu raadinayo dagaalka Itoobiya
Wararkii ugu dambeeyay dadaalada xalka loogu raadinayo dagaalka Itoobiya
Hoggaanka Midowga Afrika ayaa markale ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda dalka Itoobiya, xiisadda taagana laga wadahadlo. Midowga Afrika ayaa dadaal ugu jira inuu dhexdhexaadiyo Dowladda Federaalka iyo Maamulka Gobolka Tigreyga.
Hoggaamiye-yaasha Geeska Afrika ayaa sidoo kale Xukuumadda Addis Ababa ka codsaday inay ogolaato hannaanka dhexdhexaadinta, si loo joojiyo dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya iyo in laga hortaggo in dagaalku ku faafo gobolka.
Madaxweynaha Uganda, Yuweri Museveni ayaa ku baaqay in wadahadalo lagu dhameeyo colaadda, si aanay xaaladda kaga sii darin.
Uhuru Kenyatta, Madaxweynaha Kenya oo Isniintii la kulmay Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Itoobiya, Demeke Mekonnen ayaa sheegay in loo baahanyahay in wadahadalo lagu dhammeeyo xiisadda ka taagan dalkaasi.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle uu ku baaqayo in wadahadal lagu dhammeeyo xaaladda. Jabuuti ayaa dhanka kale is garabtaag u muujisay Xukuumadda Addis Ababa.
Madaxweyne Kuxigeenkii hore ee Nigeria, Olusegun Obasanjo ayaa Isniintii gaaray Magaalada Addis Ababa, isagoo markaasi xoojinaya baaqa ah in colaadda la joojiyo.
Wakaaladda Wararka AFP waxay sheegtay in Olusegun Obasanjo uu isku dayaayo inuu dhexdhexaadiyo Dowladda Federaalka iyo Tigreyga.
Wararka ayaa sheegaya inaanay Xukuumadda Addis Ababa dheg jalaq u siin doonin baaqyada soo gaaraya, isla-markaana uu hadafkeedu yahay inay ciidamadeedu gaaraan Magaalada Mekelle ee Xarunta Tigreyga. Wararka ayaa intaa ku daraya in Militariga Itoobiya uu haatan ku sii siqaayo magaaladaasi.
Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed waxaa uu toddobaadkii hore sheegay in dagaalka uu joogsan doono, marka la soo qabqabto Madaxda Tigreyga.
Previous articleShariif Sheekh Axmed oo hoygiisa ku qaabilay Madaxweyne Qoorqoor
Next articleWaa maxay sababta shaqada looga eryay Gudoomiyihii Gobolka Sh/hoose?